Mametraka OSSEC sy Fail2ban amin'ny Debian | Avy amin'ny Linux
Mametraka OSSEC sy Fail2ban ao amin'ny Debian
Araka ny nampanantenaina dia trosa, eto aho mba haneho aminao ny fametrahana fametrahana somary fototra OSSEC y Fail2ban. Amin'ireto programa roa ireto dia kasaiko ny hahazoana antoka kely, mpizara Apache ary SSH.
OSSEC dia maimaim-poana, loharano misokatra rafi-pitsikilovana fidirana an-tserasera (IDS). Manatanteraka famakafakana hazo, fanaraha-maso tsy fivadihana, Fisoratana an-tsoratra Windows fanaraha-maso, rootkit ny fahitana, ny fampandrenesana miorina amin'ny fotoana ary ny valiny mavitrika. Manome ny fidirana an-tsokosoko ho an'ny ankamaroan'ny rafitra fiasa, ao anatin'izany Linux, OpenBSD, FreeBSD, Mac OS X, Solaris ary Windows. Izy io dia manana maritrano afovoany sy afovoan-trano mamela rafitra maro haraha-maso sy tantanana mora foana. Nosoratan'i Daniel B. Cid ary natao ampahibemaso tamin'ny 2004.
Raha fintinina. OSSEC dia mpitsikilo fidirana an-tsokosoko izay manamarina ny fahamendrehan'ny mpizara aminay amin'ny alàlan'ny hazo sy fanairana. Ka mandefa signal isaky ny ovaina ny rakitra system sns.
Fail2ban dia fampiharana voasoratra ao Python ho an'ny fisorohana ny fidirana an-tsokosoko ao anaty rafitra iray, izay mifototra amin'ny sazy fampifandraisana (block block) amin'ireo loharano manandrana hiditra an-keriny. Nozaraina tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana GNU ary matetika miasa amin'ny rafitra rehetra POSIX izany interface izany miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso fonosana na a Firewall Local.
Raha fintinina, ny Fail2ban "bannea" na manakana ireo fifandraisana izay manandrana tsy mahomby im-betsaka impiry hiditra serivisy amin'ny mpizara anay.
2 Fifanarahana sary.
3 INDRINDRA IZAO FA TSY MISY FABADY2BAN
Mandeha amin'ny pejy ofisialin'ny OSSEC Ary alaina ny kinova LINUX.
Ary avy eo ampidinintsika ny GUI izay tontolo iainana sary.
Ankehitriny dia hametraka ny zava-drehetra isika.
Mametraka izahay izao
Manaraka izany, hahazo fanontaniana maromaro ianao. Vakio tsara ary araho ny dingana rehetra.
Rehefa vitako ny manoratra dia manamarina izahay.
Raha mandeha tsara ny zava-drehetra dia hahazo zavatra toa anao ianao.
Raha mahazo hafatra diso ianao toy ny: »OSSEC analysisd: Tsy nahomby ny fitsapana fitsapana. Hadisoana amin'ny fandaminana. Mivoaka. » Izahay dia mihazakazaka manaraka hanamboatra azy io.
Ny interface interface an'ny OSSEC dia mandeha amin'ny Internet. Raha tsy apache napetrakao. apetrantsika izy io. ary fanohanana PHP ihany koa.
Ary rehefa ROOT dia mamindra ny fampirimana isika.
Mametraka izahay izao.
Hanontany anay solonanarana sy tenimiafina (tsy mila ao amin'ny solo-sainanao ilay mpampiasa. Ho an'ny fidirana fotsiny izany) Ankehitriny dia hanao izao manaraka izao izahay.
ary aiza no voalaza ao "ossec:x:1001:"
Avelantsika toy izao: "ossec:x:1001:www-data"
Izao no ataontsika: (ao anatin'ny folder »/ var / www / ossec»
Miditra amin'ny OSSEC izahay izao. Ao amin'ny tranokalanay no manoratra. "Localhost / ossec"
Ankehitriny isika dia afaka mahita ny zava-mitranga amin'ny mpizara amin'ny alàlan'ny hazo.
INDRINDRA IZAO FA TSY MISY FABADY2BAN
Fail2ban dia ao amin'ny trano fitehirizana. Noho izany dia mora ny mametraka azy.
Tsindrio ny CTRL-W ary manoratra ssh.
Hiseho zavatra toy ny:
Io dia ahafahan'ny failt2ban ho an'ny SSH. (Raha novain'izy ireo ny seranana ssh. Nosoloin'izy ireo) Toy izany koa no ahafahantsika mamela azy io ho an'ny ftp. apache sy serivisy marobe. Ankehitriny dia asaintsika mandefa mailaka amintsika izy rehefa hitany fa misy manandrana miditra. Ao amin'ny /etc/fail2ban/jail.conf dia manampy izahay.
[ssh-iptables] azo atao = sivana marina = sshd action = iptables [anarana = SSH, port = ssh, protokol = tcp] sendmail-whois [anarana = SSH, dest =you@mail.com, sender = fail2ban @ mail.com] logpath = /var/log/sshd.log maxretry = 5
Izao dia averinay indray ny mpizara.
Araka ny hitantsika amin'ireo LOGS roa teo aloha dia asehony ahy fa nanandrana niditra tamin'ny sshd tokoa izy ireo miaraka amin'ny teny miafina tsy nahomby.
Lazainy amiko ny ip loharano ary sakanako izy. 🙂
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Mametraka OSSEC sy Fail2ban ao amin'ny Debian
lusadi dia hoy izy:
Tuto tsara, ho fandraisana anjara dia azontsika atao ny manitsy ny rakitra /etc/fail2ban/jail.conf
mba ampanjifaina safidy maro, ao anatin'izany ny fotoana fandrarana farany ambony, ny isan'ny andrana.
Misaotra amin'ny fampidirana.
Mamaly an'i lusadi
josehp dia hoy izy:
Voalohany indrindra, lahatsoratra iray tena tsara (ary bilaogy koa)! hehehe. Te hahita aho raha afaka manamboatra lahatsoratra na zavatra natokana amin'ny fanavaozana vaovao izay vao navoakan'ny Oracle avy any Java, tena vaovao be amin'ny Linux aho (manana linux mint 14) ary tsy haiko ny manavao azy, ary miaraka amin'ireo lesoka ara-piarovana ireo dia maika ny hanavao azy. . Voalohany indrindra, Misaotra! 😀
Mamaly an'i josehp
Rehefa mamaky eo aho. Nandefa fanavaozam-baovao ho an'io 0 andro io izy ireo saingy maro no milaza fa maharitra ny bibikely. Aleo apetraka tsy esorina.
tuespazio dia hoy izy:
manokana tiako ny mametraka zavatra toa an'io CSF ​​io.
Mamaly an'i tuespazio
pebelino dia hoy izy:
Misaotra anao. Handeha amin'ny OSSEC aho.
Mampiasako ny mpizara denyhosts miaraka amin'ny fail2ban. Izy io dia manao asa mitovy amin'izany (amin'ny ampahany sshd) ary manavao ihany koa ny lisitry ny 'zaza ratsy' avy amin'ny mpizara afovoany izay ahafahantsika manary ny lisitra maintinay ihany koa ary miara-miasa amin'ny famoronana lisitra matanjaka kokoa.
Mamaly an'i pebelino
Fomba ahazoana fampandrenesana amin'ny faran'ny fampiharana ny baiko ao amin'ny terminal